China Corrugated GL Galvalume Steel Saqafka Sheet ee warshadda Peru iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Galvalume sheet birta jiingado waa nooc ka mid ah xaashida jiingado oo lagu sameeyay leexin iyo laabasho qabow.Waxay ku habboon tahay qurxinta saqafka, derbiyada iyo derbiyada gudaha iyo dibadda ee dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah iyo guri qaabdhismeedka birta ah ee dheer.
3.Spangle: spangle caadiga ah, spangle yar, spangle weyn
4. Dhumucdiisuna: 0.12mm-1.0mm, dhammaan la heli karo
8. Daaweynta dusha sare: Daaweynta kiimikaad, saliid, qalalan, daawaynta kiimikada iyo saliidda, daabacaadda ka hortagga farta.
*Waxyaabaha ceeriin 1200mm ilaa 1070mm (kadib jiingado) iyo 17 mowjadaha ayaa sidoo kale soo saari kara sida ku cad.
Saqafka saqafka ah ee birta ah ee galvalume wuxuu leeyahay sifooyinka miisaanka fudud, xoog sare, midab qani ah, dhismo ku habboon oo degdeg ah, iska caabin dhulgariir, ka hortagga dabka, ilaalinta roobka, cimri dheer iyo dayactir la'aan iwm, waxaana si ballaaran loo faafiyey oo lagu dabaqay.
(3) tayada sare ee alaabta warshadda
(5) xaashida birta ah ee astaanta u ah waa shay dhisme ku habboon deegaanka, oo dib loo warshadayn karo.Shaacinta iyo adeegsiga xaashida birta ah ee astaanta u ah waxay waafaqsan tahay siyaasadda horumarinta waarta ee dhaqaalaha qaranka.
Saqafka saqafka ah ee birta ah ee galvalume wuxuu ku habboon yahay dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah, saqafyada, derbiyada iyo qurxinta gidaarka gudaha iyo dibadda ee guryaha qaab dhismeedka birta ballaaran, iwm.